Abahlali baseMpumalanga besaba ukuthi amanzi angcolile azobagulisa | Scrolla Izindaba
Abahlali baseMpumalanga besaba ukuthi amanzi angcolile azobagulisa
Kunesikhathi lapho abahlali base-Balfour, eMpumalanga, babethola khona amanzi emathangini ngoba ompompi babo babebomile.
Manje aseyaphuma amanzi kodwa angcolile kangangoba abahlali bakulendawo, abaphethwe uMasipala Wendawo yase-Dipaleseng, besaba ukuthi bengathola izifo.
UMzukisi Qwabe utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi umphakathi uyesaba ukuthi amanzi angcolile angahle aqhamuke nesifo sekholera.
“Uma abantu sebebulawa yizifo yilapho abazokwenza okuthile ngamanzi ethu angcolile futhi angaphuzeki,” kusho uMzukisi.
Ubuye wachaza ukuthi enkulumweni yesabelomali yangowe-2015, umasipala wathembisa ukuthi uzokwakha ilabhorethri yamanzi nokuhlola amanzi njalo emavikini amathathu.
“Kodwa nakhu sinamanzi angcolile,” esho.
UQwabe uqhubeke waveza ukuthi isifunda iGert Sibande sehlulekile ukunakekela izidingo zabahlali ngendlela exakile futhi kumele bazenyeze.
Obambe njengemenenja kamasipala, uJohnny Mogkatsi uthe izinkinga zibangelwa yingqalasizinda endala futhi eseyonakele eminyakeni edlule.
“Uhlelo oludala lokuphakelwa kwamanzi lwalwenzelwe umphakathi omncane ongenawo abantu abaningi futhi odinga amanzi angamaningi. Uhlelo oludala lokuphakelwa kwamanzi lunamapayipi e-asbestos ahlala eqhuma njalo,” kusho yena.
“Eminyakeni edlule, umasipala ubhekane nokukhula kwenani labantu kanye nentuthuko okuholele ekwandeni kwezidingo zabantu.”
Uthe, uhlelo ludinga ukulungiswa ngokuphelele.
“Umasipala kumele ube nezinhlelo eziningi zokubhekana nale nkinga. Kumele uhlose ukulungisa lesi simo esibucayi nokuqeda konke ukuphakelwa kwamanzi kanye nezinselelo ekupheleni kowe-2023,” kusho yena.
Uthe, izinga lamanzi liyabhekwa, lihlolwe njalo futhi liqashwe ngumasipala elabhorethri kuMasipala wesiFunda iGert Sibande nokuthi izivivinyo zenziwa nguMnyango Wezamanzi Nokuthuthwa Kwendle.